Vonoan’olona narahina fandrobana: telo lahy voaheloka higadra, asa an-terivozona 10 taona | NewsMada
Voaheloka hamita sazy asa an-terivozona an-tranomaizina 10 taona i Lambo Fanomezantsoa sy Soja Filiantsoa ary Tomporomihary Damy, tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona mahatsiravina narahina fandrobana vola sy fitaovana isan-karazany tao Tsarahonenana Toamasina, ny 10 janoary 2017.
Io ny didy navoakan’ny fitsarana nandritra ny fotoam-pitsarana ady heloka bevava tao amin’ny Lapan’ny fitsarana ambony misahana ny ady heloka bevava momba ny raharaha vonoan’olona mahatsiravina tao Tsarahonana, antontan-taratasin’ady mitondra ny laharana 95-Toa/18. Raha hiverenana ity raharaha ity, ny alin’ny 10 janoary 2017 nidirana andian-jiolahy miisa enina nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ny tokantrano iray ao Tsarahonenana. Araka ny fanazavan’ny vadin’ny niharam-boina, mpiasa amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina teo aloha fa efa misotro ronono ilay raim-pianakaviana (novonoin’ireo jiolahy) ary mivarotra ao amin’ny fokontany Tsarahonenana izy mivady ireo. « Tokony ho tamin’ny 8 ora alina, niditra an-keriny tao an-tranonay ireo jiolahy miisa enina ary samy nitondra basy ka nodarohan’izy ireo avy hatrany ny vadiko ary tsy namelan’izy ireo fa notifirina ihany koa. Tsy vitan’izay fa mbola nofatorana sy naolan’izy ireo koa ny zanakay vavy », hoy ny fitantaran’ilay renim-pianakaviana vadin’ilay niharam-boina. Lasan’ireo mpanafika kosa ny entana rehetra tao an-trano niaraka tamin’ny vola mitentina 15 tapitrisa Ar saika hakana entana.
Efa namono mpiasan’ny kaominina…
Ny alin’io fanafihana io ihany, tratran’ny polisin’ny Fip ny jiolahy iray antsoina hoe i Soja Filiantsoa. Voampanga tamina raharaha vonoan’olona tao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina ihany koa izy, ny taona 2014. Hitan’ny polisy tao an-tranon’ilay niharam-boina ny dian’ny kiranila nanaovany ka niainga avy amin’izany no nahafahan’ny polisy nanao ny fisamborana azy. Mbola nahitana ra ny kiranila nanaovany tamin’ny fotoana nisamboran’ny polisy azy. Tsy afa-niala intsony ilay jiolahy fa niaiky ny heloka vitany. Niainga avy amin’ny famotorana azy no nahafahan’ny polisy nisambotra ireo namany dia i Lambo Fanomezantsoa sy Tompomihary Damy niray tsikombakomba taminy, tamin’ity vonoan’olona feno habibiana ity. Samy niaiky ny heloka vitany ireo jiolahy nandritra ny fotoam-pitsarana azy ireo. Nilatsaka ny didy navoakan’ny fitsarana ka izao voaheloka an-tranomaizina sazy mihatra 10 taona izao.